सुरेल जाति र नेपाल
नेपालमा सुरेल जातिको मुख्य बसोबास क्षेत्र भनेको दोलखा जिल्लाको तामाकोसी नदी आसपासको बस्ती हो । कहिलेदेखि त्यो क्षेत्रमा उनीहरुको बसोबास भयो त भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन । उनीहरु पहिलेदेखि नै बसोबास भएकोले होला उनीहरु बसेको क्षेत्रलाई नै सुरी गाउँ विकास समिति भनेर नामाकरण भएको भेटिन्छ । सुरेल जाति मंगोलियन भएता पनि हिन्दु धर्म मान्ने गर्दछ ।
सुरेल जाति शिक्षा क्षेत्रमा अगाडि नभएका कारणले उनीहरु कृषि पेसामा नै आश्रित छन् । उनीहरुको आफ्नै जातिगत भाषा भए तापनि उनीहरु अरु जातिका मान्छेहरुसँग बोल्दा नेपाली भाषामा नै बोल्ने गर्दछ ।
सुरेल जातिमा मागी विवाह र चोरी विवाह दुबै परम्परागत संस्कारका विवाहहरु हुन् । यी संस्कार भए तापनि उनीहरु बहुविवाह जारी विवाह गर्ने चलनलाई पनि त्यत्तिकै कायम राखेको पाइन्छ । सुरेल जातिमा आफ्नै जातिभित्र गोत्र फरक पारेर विवाह गर्ने चलनलाई सामाजिक मान्यता दिएका कारणले विशेष त यो चलनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । तर, यस्ता परम्परागत चलनहरु विगतमा रहे तापनि केही शिक्षा क्षेत्रमा अगाडि बढेका युवा तथा युवतीहरु यस्ता चलनलाई सुधार गर्नु पर्छ भन्नेमा पनि देखिन्छ । मागी विवाह गर्दा केटी माग्न जाँदा केटा पक्षबाट सेलरोटी र रक्सी लिएर जाने चलन रहेको छ । जसलाई उनीहरु सगुनको रुपमा मान्ने गर्दछ ।
सुरेल जाति आपूmलाई किराँची हो भन्ने गर्दछ । उनीहरु ऐले पनि किराँत जातिको धर्मग्रन्थ मुन्धुमलाई मान्ने गर्दछ । मुन्धुमलाई मान्ने गरे तापनि उनीहरु विशेष गरी धामीझाँक्रीमा विश्वास गर्दछ । कोही बिरामी भइहालेमा स्वास्थ्यकर्मीबाट उपचार गर्नु भन्दा पनि धामीझाँक्रीबाट झारपूmक गर्ने गर्दछ । सबै बिरामी धामीझाक्रीले नै निको पार्दछ भन्ने उनीहरुमा अहिले पनि परम्परागत विश्वास रहेको छ । उनीहरु आफ्नो पितृकार्य बाहुन पुरोहित बोलाएर सम्पन्न गर्दछ । आफ्नै जातिको पुरोहित सुरेल जातिमा छन् । जसलाई उनीहरु मेयाम्बो भने गर्दछ । विगतमा बाहुन पुरोहित बोलाएर पितृकार्य गर्ने चलन भए तापनि अहिले उनीहरु आफ्नै जातिको पुरोहित मेयाम्बोलाई बोलाएर गर्ने चलन सुरु गर्न थालेका छन् ।
नेपालमा २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार १ सय २५ जाति बसोबास गरेको उल्लेख छ । यी १ सय २५ नै जातिको जन्म, मृत्यु तथा गरिने धार्मिक संस्कारहरु हेर्ने हो भने १ सय २५ नै प्रकारको पाइन्छ । एउटा जातिको अर्को जातिसँग कुनै पनि संस्कारहरु मिलेको पाइन्न । हुन सक्ला केही एक दुईवटा गर्ने विधि मिल्न सक्ला । तर हुबहु सबै मिलेको भने पाइन्न । मृत्यु संस्कार पनि नेपालमा भए जति सबै जातिको फरक–फरक रहेको पाइन्छ । मृत्यु संस्कार नै हेर्ने हो भने पनि कुनै जातिको जलाउने रहेको हुन्छ । कुनै जातिको अनिवार्य गाड्ने त्यो पनि आफ्नै घरको आसपास र आफ्नै जग्गामा । कुनै जातिको मृतक लासलाई काटेर चिल र गिद्धलाई ख्वाउनेसम्मको चलनहरु रहेको पाइन्छ ।
जब सुरेल जातिको कुनै मान्छेको मृत्यु हुन्छ । लासलाई तुरुन्तै घरबाट निकाली घरको पिंढीको दायाँपट्टि राख्ने गरिन्छ । सुरेल जातिमा लासलाई गाड्ने गर्दैनन् । तर दस वर्षभन्दा कम उमेरका मरेमा सुनकोसी नदीको किनारमा लगेर गाड्ने चलन रहेको छ । लासलाई जलाउने गर्दछ । लासलाई जलाउनु अघि लासलाई नुहाइ दिने र नयाँ कपडा लगाइ दिएर चितामा राख्छन् । सुरेल जातिमा लासलाई जलाउन चिता बनाउँदा उमेरअनुसारको आधारमा दाउरा राखेर बनाउँछन् । अनि जलाउने गर्दछ । सुरेल जाति झाँक्रीमा विश्वास गर्दछ । यिनीहरुको सम्पूर्ण विधि झाँक्रीबाट नै गर्ने गर्दछ । क्रिया जम्मा बाह्र दिनसम्म मात्र बार्ने गर्दछ । अनि बाह्रौ दिनमा शुद्ध हुने गर्दछ ।
१. लेखक रामप्रकाश समथिङ, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय फिदिम, पाँचथर र नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद् पाँचथरद्वारा प्रकाशित– पाँचथरका आदिवासी जनजातिहरु जेष्ठ–२०६६
६. ०६ लेखक डा.हर्क गुरुङद्वारा लिखित नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघद्वारा प्रकाशित–जनजाति सेरोफेरो मे—२००६
(अर्को अंकमा हायू जातिको बारेमा लेख प्रकाशन गरिने छ)